Tunisia yekushanya yakadzokera mubhizinesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tunisia Kupwanya Nhau » Tunisia yekushanya yakadzokera mubhizinesi
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Musangano Weindasitiri Nhau • Dhinda Zviziviso • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Tunisia Kupwanya Nhau • UK Kuputsa Nhau
Tunisia ine tarisiro yekukwezva vamwe vashanyi vekushanya kuWTM London 2017, zvichitevera nhau dzekuti Thomas Cook nemamwe mafemu ekuBritain ekufamba vachadzokera munyika kubva kutanga kwa2018.
Iyo UK Kunze Hofisi yakachinja zano rayo rekufamba muna Chikunguru, ichigadzira nzira yekuti vashanyi vekuBritain vatange kutengesa mazororo zvakare kunzvimbo inozivikanwa.
National carrier Tunisair - iyo isina kumbomira kubhururuka kubva kuUK kuenda kuTunisia - parizvino inoshanda nendege dzezuva nezuva kubva kuLondon. Thomas Cook atangazve kutengesa mazororo ayo achatanga kubva muna Kukadzi 2018, aine hotera sere padyo nenzvimbo yekutandarira yeHammamet.
Mounira Derbel Ben Cherifa, Director weTunisian National Tourist Office kuUK, vakatambira nemufaro nhau dzekuti Thomas Cook nevamwe, vakadai saJust Sunshine, Cyplon Mahoridhe neTunisia Kutanga, vari kudzokera kuTunisia.
"Tine chivimbo chekuti maBrits achadzoka zvakare kuTunisia sezvo vanga vachienda kuzororo ikoko kwemakore makumi mana apfuura," akadaro.
Akaratidza kuti zviuru zvemaBrits akazvipira zvakaramba zvichienda kuzororo munyika yekuchamhembe kweAfrica kunyangwe hofisi yekune dzimwe nyika yakarambidzwa.
Derbel Ben Cherifa vakati meseji huru paWTM London ichave iri "Tunisia yakavhurika bhizinesi zvakare".
"Ticharamba tichitaurirana nevatinoshanda navo uye tichivatsanangudza nezve izvo zvitsva zvigadzirwa, zviitiko uye kupa chiratidzo nezve kugadzirira kwedu kugamuchira zvakare vafambi veBritain," akadaro akadaro.
Iyo Tunisian National Yekushanya Hofisi iri kuvandudza marongero ekushambadzira nevatengesi vevashambadziri, sevashanyi vashanyi, vezvenhau nevamiriri vekufamba, pamwe nevatengi.
Akataura kuti Thomas Cook - aimiririra hafu yemusika weUK - anga achingogara achisangana nebhodhi revashanyi muLondon ne Tunisia, sezvo yanga ichinyanya kuda kutangazve chirongwa chayo cheTunisia nekukurumidza sezvazvinogona.
Pamberi pekurambidzwa muna 2015, vangangoita mazana mana nemakumi maviri eBrits vaienda kuTunisia gore rega. Muna 420,000, izvo zvakadonha kungodarika zviuru makumi maviri nezviviri nekuda kwezvirambidzo
Nhamba dzave kuchikwira muna 2017, pamwe vangangoita 17,000 vanofamba mumwedzi misere yekutanga yegore, vachikwira 14% zvichienzaniswa nenguva imwechete muna 2016.
Derbel Ben Cherifa anofungidzira kuti nhamba dzichasvika 30,000 muna 2017, uye dzichapeta zvakapetwa muna 2018 kusvika pa65,000.
Iye akati bhodhi revashanyi richashanda kusimbisa vafambi nekusimbisa reTunisia zvinokwezva, senge mwaka wintersun zvitupa, nzvimbo dzekugara, kuona nzvimbo uye niche misika.
Iyo ine anopfuura mazana manomwe mamaira emhenderekedzo yegungwa pamwe neMediterranean; angangoita mazana matanhatu emahotera, achiitira huwandu hwemabhajeti; uye gumi dzakagadzirirwa nyika dzegorofu.
Kune nzvimbo dzezvakaitika kare dzinodzokera kumashure zviuru zvemakore, uye nzvimbo dzakakurumbira dzekutora mafirimu senge Chirungu Chirwere, Monty Python Hupenyu hwaBrian uye mafirimu akati wandei kubva kuStar Wars franchise.
Zvakare nekutora chikamu muWTM London, bhodhi revashanyi iri kuronga kudzidzisa vekuUK kufamba vamiririri nerwendo rwemigwagwa uye nzendo dzakakurumbira, dzinoitwa pamwe nevashanyi vekushanya. Nguva dzose mapepanhau ekudhinda akarongedzerwa kuti vawane meseji nezveTunisia.
World Travel Market London, Senior Director, Simon Press, vakati: “Idzi inhau dzakanaka dzekutengesa kuUK. Ndinoziva maBritish vafambi vanogamuchira kudzoka kwemazororo eTunisian, sezvo vaine vatengi vazhinji vachibvunza nezvezororo kunyika.
"Zvaikurudzira kuona kuti Thomas Cook angakurumidza sei kutengesa mazororo kumusika weBritish, sezvo iine zvikwata zvekushandira vatengi veGerman, Belgian neFrance, vane hurumende dzisina kupa zano pamusoro pekushanyira nyika."